Media Mission Nepal लेख/रचना Archives - Page2of5- Media Mission Nepal
कोरोना भाइरसको त्रास चीनबाहिर पनि फैलिन सक्ने
मोहिनी मिश्र रिसाल । काठमाडौँ, ११ माघ : यतिखेर चीन कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण थप बढ्न जाला कि भन्ने त्रासमा देखिन्छ । शनिबारसम्म प्राप्त भएको समाचारअनुसार यो सङ्क्रमणको प्रकोप चीनका कम्तीमा
सन् २०२० का सम्भावित केही विश्व घटना
जीवन भण्डारी । काठमाडौँ, २० पुस : सन् २०१९ को विदाइपछि नयाँ वर्ष सन् २०२० आएसँगै यस वर्ष केही सम्भावित विश्व घटनाका बारेमा चर्चा शुरु भइसकेको छ । अघिल्लो वर्षमा
सन् २०१९ मा अस्ताएका विश्वका केही व्यक्तित्व
जीवन भण्डारी । काठमाडौँ, १७ पुस : सन् २०१९ मा विश्वले कैयौँ चर्चित व्यक्तित्वलाई गुमाएको छ । राष्ट्र तथा सरकार पूर्व प्रमुखदेखि चर्चित कलाकार तथा लेखकहरुसम्म यस वर्ष निधन भएको
श्रम प्रशासन सुधार र विकेन्द्रीकरणमा केन्द्रित सन् २०१९
अशोक घिमिरे । काठमाडौँ, १४ पुस : सन् २०१९ मूलतः श्रम प्रशासन सुधार तथा विकेन्द्रीकरण र वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनमा केन्द्रित रह्यो । सोही अवधिमा श्रम कानून परिमार्जन गरी श्रमिकमैत्री बनाउने
वर्षको विश्व राजनीति : चर्चाको शिखरमा अमेरिका
एकराज पाठक । काठमाडौँ , १४ पुस : विशेषत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका कारण सन् २०१९ को विश्व राजनीतिको चर्चामा यसवर्ष पनि अमेरिका नै देखियो । वर्षको शुरुआतमा उत्तर कोरियाली नेतासँगको
राजनीतिक चासो र चर्चाकै घेरामा दक्षिण एसिया
एकराज पाठक । काठमाडौँ, १२ पुस : डिसेम्बर १० मा विश्वभर मानवअधिकार दिवस मनाउन थालेको सत्तरी वर्ष पुग्यो । सन् १९४८ डिसेम्बर १० मा संयुक्त राष्ट्रंघको महासभाले अल्पसंख्यक एवम् सबै
नारायण ढुङ्गाना । काठमाडौँ, १८ भदौ : बैंकिङ प्रणालीमाथि नै प्रश्न उब्जने गरी भदौ १४ मा काठमाडौँमा एटिएमको स्विच नै ‘ह्याक’ गरेर करोडौँ रकम निकालियो । यति ठूलो रकम निकालिए
सेथ बोरेन्स्टाइन । ग्रीनल्याण्ड, ११ भदौ : अमेरिकी अन्तरिक्ष विज्ञान संस्था (नासा) को सानो हवाई जहाजबाट करिब ५०० फिटमुनि ठुल्ठूला हिउँका ढिक्का लहराइरहेको दृश्य देख्न सकिन्छ । नीलो–हरियो समुद्रमा सेता
प्रा.डा. देवमणि भट्टराई । कार्तिक शुक्लपक्षको एकादशी तिथिलाई हरिबोधिनी एकादशी भनिन्छ। ‘हरि’ भन्नाले भन्नाले भगवान् विष्णुलाई बुझिन्छ भने ‘बुध्’ धातुबाट बनेको ‘बोधिनी’ शब्दले निद्राबाट जागा हुने भन्ने जनाउँछ। पुराण एवं धर्मशास्त्रमा
प्रा.डा. देवमणि भट्टराई/ उपप्रा. लक्ष्मीप्रसाद बराल । तिहारको पाँचौं दिन दिदीबहिनीहरूले आफ्ना दाजुभाइलाई पाउदेखि शिरसम्म पूजा गरेर सुगन्धित तेल आदि कपालमा लगाएर तेल र जल लिएर तीन पटक परिक्रमा गरी विधिपूर्वक
संविधान संशोधन सर्वसम्मत पारित गर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह
रेमिट्यान्समा उच्च गिरावट, चैत र वैशाखमा ६७ अर्बले घट्यो
एडीबीद्वारा कोरोनासँग जुध्न नेपाललाई ३० अर्बको ऋण स्वीकृत
सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र कर्णाली प्रदेशमा
गुल्मी धुर्काेट गाउँपालिका अध्यक्षलाई काेराेना संक्रमण